Ugbo na Mee N'onwe Gị
Anyị na-amasị Ugbo na dị ka ọ bụla ọrụ, Mee N'onwe Gị dị. Na Mee N'onwe Gị na ugbo anyị na-ezo aka na ntuziaka maka -eme ngwá ọrụ na ihe maka ubi anyị.
Ihe anyị chọrọ bụ na mgbe ị nwere echiche maka ubi gị, site na ịgbara mmiri akpaka na iwu nke ite ifuru, griin haus ma ọ bụ ngwa ọrụ ịgha mkpụrụ, elela anya ebe ị nwere ike ịzụta ya mana lee ebe a ma chee echiche olee otu ị ga - esi mee ya n'onwe gị.
M laghachiri na isiokwu nke composting site na ụfọdụ vidiyo na m hụrụ nke Charles na-akwụ ụgwọ nke dabere na nkà ihe ọmụma nke No Dig, No Dig (nke anyị ga-ekwu maka ya na isiokwu ọzọ). Dowding na-eji compost n'ubi ya. Compost maka ihe niile. Ọ na-akụzikwara gị ma kee ya ma jiri ya rụọ ọrụ yana ihe ubi ma lekọta ogige gị.
Compost Ezi ntụziaka Enwere ọtụtụ, ọ bụ ezie na ha niile dabere n'otu ụkpụrụ mana onye ọ bụla na-eme ya n'ụzọ nke ha.
Ahụla m ma gụọ ọtụtụ ọdịnaya metụtara ya ma enwere ndị na-anwa ime ngwa ngwa ka o kwere mee iji mee usoro ahụ ngwa ngwa, ndị ọzọ na-agbakwunye anụ, ọbụlagodi nri esiri esi, mana enweghị m ike ịhụ nke ahụ. Tinye anụ dị ka ihie ụzọ maka ụdị ire ere aerobic, ihe ọzọ bụ na ị na-etinye nri mkpofu si n'obodo mepere emepe, dịka ndị anakọtara na bins, mana a na-ejikarị usoro anaerobic eme ya na anyị na-ekwu maka ihe dị iche.
Ana m eji a blanket blanket ka germinate osisi. Ọ bụ akwa eletriki (nke na-ekpo ọkụ) nke na-eme ka ọnọdụ nke ala dị elu site na ihe dịka 10ºC ma mee ka ọmụmụ nke mkpụrụ na ịgbanye mgbọrọgwụ gbasaa. Enwetala m ezigbo nsonaazụ ya na mkpụrụ nke ose habañero. Na-eme ka ha germinate na dị nnọọ 8 ụbọchị
Enwere ụdị dị iche iche, na mgbakwunye na nha ha dị iche na ike. E nwere ndị nke 17,5W nke na-ewelite ọnọdụ ihu igwe dị elu site na 10% na ndị nke 40,5W na-ebili n'etiti 10 na 20 ogo. Mgbe itinye ya n'ọrụ ị ga-eche ihe dị ka nkeji 20 ruo mgbe ọ ga-ekpo ọkụ ruo na njedebe ikpeazụ. Ha na-arụ ọrụ nke ọma maka agụụ ma ọ bụ iji kwalite seedlings. N'afọ a dị ka mgbe niile m anọwo ọdụ na-akụ ihe, mana hey. Enwere m blanketị maka afọ ọzọ. Enwere m zuta ihe a.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ihe niile na-achịkwa ya ị nwere ike itinye a thermostat dị ka nke a, ma ọ bụ mee otu dabere na Arduino na ọsọ agba anọ (ọ bụ ọrụ m na-atụ anya ya).
Otu esi eme ugu ulo ogwu site na ugu
Kemgbe oge ọkọchị gara aga enwere m ihicha otu ugu (nri gourd) yiri ugu ugu, ma na nke a ọtụtụ ihe ndị ọzọ elongated udi.
Na oge abịa mee ihe na ya ;-)
Ebe obu na echegharala m 1 achoro m iji ya dika otu kantiinụ ibu mmiri. Ya ewu dị nnọọ mfe. Naanị anyị ga-emefu ya ma kpochapụ ya.
Anyanwụ ntapu ogbugba mmiri n'ubi - na Kondenskompressor
Na-achọ ihe ọmụma na irgba ala ụlọ akpaaka maka oge ọkọchị Ahụla m ihe ịtụnanya a.
Ee; Ahụ dị ka nke a, ọ bụghị ihe ịtụnanya nke usoro ahụ, ọ bụ eziokwu, ha bụ naanị karama plastik mana ngwaọrụ ya na ịdị mfe ya niile ga-enyere anyị aka ịgbara mmiri na akpaghị aka ego ichekwa mmiri.
Ọ bụ ihe Kondeskompressor, :) usoro ogbugba mmiri n'igwe. Usoro a dabere na evaporation na condensation nke mmiri iji nye osisi ahụ iru mmiri ọ chọrọ na akpaghị aka.
Paletocactus - Otu esi eme pallet maka cactus
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị hụrụ otú e si eji pallet eme ogige kwụ ọtọ.
Taa, anyị na-eweta mgbanwe yiri nke ahụ, mana nke ahụ sitere na iji obe nke pallets ime planters. Ezigbo itinye kaktus na succulent ma ọ bụ anụ ahụ nke na-eguzogide ala akọrọ nke ọma.
Otu esi eme pallet vetikal
Have nwere mbara ihu ma ọ masịrị gị na ahịhịa na ịkọ ugbo? Lee anya gbanwee pallet ka ọ bụrụ ezigbo ogige kwụ ọtọ.
Ha abụghị Ogige Ubi nke Babịlọn, ma ị na-amalite elu ;-)
Eji m aka na o masiri gi, eeje. Ya mere, anyị na-aga.
Esi eme ọwa site na karama mmanya
Nke a bụ otu n'ime nkuzi ndị ahụ achọtara m site na ịwụfu site na otu blog gaa na ọzọ.
Echiche ya jiri karama mee ka ọ ghọọ ọwa. Ezigbo iji nweta ha n’ubi gị n’oge ọkọchị.
Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-achọ. Ihe niile doro anya, ikekwe ka mma dokwuo anya ...
2. bụ Teflon, ụdị eji akwọ mmiri.
5. na 6. Cougba mbọ na ọla kọpa
Otu esi emekota ulo n'ime pallets
M amalitela -eme ka compost na emeela m a nnọọ mfe arụrụ n'ụlọ compoundster na pallets. M na-ahapụrụ ụfọdụ foto na obere nkọwa ka ị nwee ike ịhụ etu m siri mee ya na ngwụsị nke isiokwu ahụ, ị ​​ga-ahụ ụdị ọzọ ejiri pallets mee, na-eitatingomi bọs compost.
M na-eji pallets ochie m na-ejigharị n'aka ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ga-atụfu ha.
Nha m ji mee ihe bụ pallet Euro, yabụ na ị maraworị ihe 1,20 × 0,8 m nke mere na compost bin ga-enwe ntọala nke 1m x 0,8m elu.
Otu esi eme ulo akwukwo nri ulo
Mmiri dị ebe a na ubi, ubi mkpụrụ osisi na obodo jupụtara na nnụnụ na-amalite oge ozuzu.
Ọ bụrụ na ị nwere ubi, ma ọ bụ ụfọdụ ohere ebe ụmụ nnụnụ na-abịa, anyị nwere ike ịme ihe a na-enye ọnụ ala kachasị ọnụ ala yana ụfọdụ efere Ikea.
Ihe dị iche n’etiti feeder a na ndị ọzọ anyị nwere ike iji ihe ndị ọzọ mee bụ na ọ nwere ntakịrị ọmarịcha karịa nke ejiri karama plastik mee.
Ihe ndị dị anyị mkpa na-anọchi anya ndị na-esonụ oyiyi, ha dị nnọọ ole na ole ma dị nnọọ ọnụ ala.
Otu esi eji ogwu na-eme ogwu ulo n'ime ulo
M bu n'uche echiche nke mee ụyọkọ ụlọ iji nweta ihe mkpofu ahịhịa na kichin.
Achọrọ m inyocha karịa banyere aerobic, anaerobic na vermicomposters. Ya mere, m ga-ahapụrụ gị ozi, ụdị egwuregwu dị iche iche m na-ahụ na ule ụfọdụ m na-eme.
Oghere ndị dị na drum bụ nke mere na ọ na-eme nke ọma na ihe ndị na-emepụta ihe na-eme ka ọ dị mma.